Ungayikhetha njani i-Iron Casserole Dish ebalaseleyo
ngu admin nge-20-07-18
Kwi-Ergonomics Ngombono wokungayiphathi kakuhle imodeli, kuya kuba yimfuneko ukwazi ukuba yeyiphi i-iron casserole oyikhethayo. Iziphakamiso ezininzi kwimarike zilahlekisa abantu abaninzi. Kule meko, akufuneki sigxile kuphando lwethu kuphela kwinkalo yangaphandle yomzekelo. Ewe, ...
Igalikhi inokunceda ekulweni ukubanda
NgoMvulo, sithethe malunga nokuba inkulu kangakanani i-Vitamin C kumzimba wakho kwaye ungakunceda njani ukuba ube ngaphezulu komkhuhlane okanye umkhuhlane. Namhlanje, sijonga isisombululo esingaziwayo ekhaya: igalikhi. Oogogo bebesoloko befunga ngerabha kubanda kangangeshumi leminyaka. Kodwa, besifuna ukufunda okungakumbi malunga ...
-Shijiazhuang Kingway Imp. & Exp. Co, ltd, utyala imali eninzi ngakumbi ekubambeni iimveliso ezintsha Iinto ezintsha ziya kubonakala imbonakalo entsha nangomsebenzi omninzi. Olu luhlu lutsha lwe-iron casseroles luya kuba ngumbala omtsha wombala kunye nobukhulu obungaphezulu bokukhethwa kwabathengi. Izixhobo ziphoswe ir ...